Nagu saabsan | Xuzhou Hoyer Glass Technology Co., Ltd.
Hoyer Glass waa soo gaabinta iskaashiga rabbaaniga ah, ee ka soo baxday macmiilkayaga Michael's comment. Muraayadaha Hoyer inta badan waxay ku hawlanaayeen cilmi baarista iyo horumarinta, nashqadeynta, soosaarka, suuqa iyo ganacsiga dhammaan noocyada baakadaha dhalada oo tayo sare leh. Xirfad-yaqaan ahaan iyo orodyahan hore ee warshadaha wershadaha galaas ee Shiinaha, Hadda, waxaan ka shaqeynaynaa 11 maqaal oo taxane ah oo leh kumanaan nooc, sida dhalooyinka qurxinta, dhalooyinka cabitaanka, dhalooyinka dhalada, dhalooyinka malabka, dhalooyinka macaanka, weelka cuntada, dhalooyinka cabitaanka, , dhalada daawada, miraha la qaso, jajabinta ukunta, taarikada miraha, koobabka, miiska miiska iyo waxyaabaha kale ee la xiriira.
Quraaradda Hoyer wuxuu leeyahay 30 khad goyn, waxsoosaarka sanadka soo saarkiisuna waa 300 milyan gogo '(150,000 tan). Waxaan haynaa 6 aqoon-isweydaarsiyo-qoto-dheer oo awood u leh inay ku deeqaan qaboojinta, daabacaadda sumadda, daabacaadda buufin, daabacaadda shaashadda, sawir-ka-qorista, goynta si loo xaqiijiyo adeegyada "hal-stop shop" ee adiga adiga kuu ah.
Alaabooyinkeenna waxaa caddeeyay SGS, CE, GE, ISO iwm. Waxayna ku raaxeysteen caan weyn suuqa adduunka. Alaabooyinkeena ayaa loo qaybiyay in kabadan 30 wadan iyo gobollo kala duwan, sida Mareykanka, Australia, Hong Kong, Africa, Europe, Koonfur bari Aasiya, Bariga Dhexe iyo wixii la mid ah.
Ku qanacsanaanta macaamiisha, alaabada tayada sare leh iyo adeegga ku habboon had iyo jeer waa hawlgallada shirkadda. Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa saaxiibbada guriga iyo dibadaba ku booqda warshaddeenna. Annaga oo la shaqeyna kooxdeena xirfadda leh, mas'uul ka ah, firfircoon, iyo qibrada leh, waxaan aaminsanahay in howlaheenna ay awood u leeyihiin inay ka caawiyaan ganacsigaaga inuu si isdaba joog ah nalagu koboco